SARUDZA MUTAURO Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Bislama Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lithuanian Luo Malagasy Malayalam Marathi Mizo Moore Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tatar Telugu Thai Tigrinya Tongan Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese
NEI MHINDURO YACHO ICHIKOSHA? Vanhu vakawanda vanodzidziswa kuti upenyu pasi pano hwakangoerekana hwavapo. Vanoudzwa kuti kushanduka-shanduka kwakaita kuti zviitiko zvisina kurongwa zvaitevedzana zvierekane zvabudisa vanhu, vanhu vane unhu, vane njere, uye vanoda kuziva chinangwa choupenyu.
Asi chimbofunga kuti: Kana takaitwa kuti tivepo nokushanduka-shanduka uye kana kusina Musiki, neimwe nzira tiri nherera. Vanhu vaizoshayiwa munhu akachenjera zvikuru wokubvunza, pasina aizotibatsira kugadzirisa matambudziko edu. Taizofanira kuvimba nevanhu vakachenjera kuti vaite kuti pasaitika njodzi, kuti vagadzirise nharo dzematongerwo enyika, uye kuti vatitungamirire pamatambudziko edu.
Kufungidzira izvi kungaita kuti ugadzikane mupfungwa here? Kana kusingadaro, chimbofunga kuti zvaizodini kudai paiva nomunhu akachenjera zvikuru. Hazvingonakidzi kufungidzira asiwo zvine musoro.
Bhaibheri rinodzidzisa kuti munhu akasikwa naMwari pachake. Hatina kuitwa kuti tivepo nokushanduka-shanduka kusingaratidzi kuva nehanya, kusina musoro. Asi tiri vana vaBaba vane rudo, vakangwara. Funga nezvemashoko aya akajeka anotaurwa muBhaibheri.
Genesisi 1:27. “Mwari akatanga kusika munhu nomufananidzo wake, akamusika nomufananidzo waMwari; akavasika munhurume nomunhukadzi.”
Pisarema 139:14. “Ndichakurumbidzai nokuti ndakaitwa nenzira inoshamisa, inotyisa. Mabasa enyu anoshamisa, mweya wangu unonyatsozviziva.”
Mateu 19:4-6. “Hamuna kuverenga here kuti iye akavasika kubva pakutanga akavaita munhurume nomunhukadzi? Uyewo kuti akati, ‘Saka murume achasiya baba vake naamai vake onamatira mudzimai wake, uye vaviri vacho vachava nyama imwe’? Zvokuti havasisirizve vaviri, asi nyama imwe. Naizvozvo, ngaparege kuva nomunhu anoparadzanisa zvasungwa pamwe chete pajoko naMwari.”
Mabasa 17:24, 25. “Mwari akaita nyika nezvinhu zvose zviri mairi, Iyeyu zvaari Ishe wedenga nenyika, haagari mutemberi dzakaitwa nemaoko, uyewo haashandirwi nemaoko evanhu sokunge kuti pane chimwe chinhu chaanoshayiwa, nokuti iye anopa vanhu vose upenyu nemhepo yokufema nezvinhu zvose.”
Zvakazarurwa 4:11. “Jehovha, imi Mwari wedu, makakodzera kuti mugamuchire kukudzwa nokuremekedzwa nesimba, nokuti makasika zvinhu zvose, uye nemhaka yokuda kwenyu zvakavapo uye zvakasikwa.”
Kuziva kuti “mhuri dzose dziri . . . panyika dzinowana mazita adzo kubva” kuna Mwari kunochinja maonero atinoita vamwe vanhu. (VaEfeso 3:15) Kuziva izvozvo kunochinjawo maonero atinozviita uye zvinotinetsa. Mafungiro edu achachinjwa sezvinotevera.
Patinenge tichifanira kuita zvisarudzo zvinokosha, hatizonyanyi kunetseka nezvemaonero evanhu akasiyana. Asi tichavimba zvakakwana nezano reBhaibheri. Nei? Nokuti “Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari uye runobatsira pakudzidzisa, pakutsiura, pakururamisa zvinhu, pakuranga nokururama, kuti mu- nhu waMwari akwanise zvizere, akashongedzerwa zvakakwana kuita mabasa ose akanaka.”—2 Timoti 3:16, 17.
Chokwadi, zvinoda kushanda nesimba uye kuzvidzora kuti tiite zvinotaurwa neBhaibheri. Dzimwe nguva zvingatoda kuti tiite zvatisingadi. (Genesisi 8:21) Zvisinei, kana tichibvuma kuti takasikwa naBaba vedu vokudenga vane rudo, zvinongova nomusoro kuti tigumise kuti ndiye anoziva nzira yakanakisisa yokuti tifambe nayo. (Isaya 55:9) Saka Shoko rake rinotivimbisa kuti: “Vimba naJehovha nomwoyo wako wose, urege kuvimba nokunzwisisa kwako. Funga nezvake munzira dzako dzose, uye iye acharuramisa makwara ako.” (Zvirevo 3:5, 6) Kana tikaita izvozvo, kuzvidya mwoyo kwatinoita patinenge tatarisana nematambudziko uye zvisarudzo kuchapera.
Patinosarurwa, hatizoremerwi tonzwa sokuti takaderera, tichifunga kuti pamwe hatikoshi pane vamwe vorudzi rwakasiyana norwedu kana vane tsika dzakasiyana. Asi tichazviremekedza zvine mwero. Nei? Nokuti Baba vedu, Jehovha Mwari, “haasaruri, asi murudzi rwose munhu anomutya uye anoita zvakarurama anogamuchirwa naye.”—Mabasa 10:34, 35.
Kuziva izvi kuchaitawo kuti tisasarura vamwe. Tichanzwisisa kuti hapana chikonzero chaicho chokuzviona setiri nani pane vamwe vorumwe rudzi, sezvo Mwari “akaita marudzi ose evanhu kubva pamunhu mumwe chete, kuti agare pamusoro penyika yose.”—Mabasa 17:26.
Zvechokwadi, kuziva kuti takasikwa uye kuti Musiki wedu ane hanya nesu kunoita kuti tive nepfungwa dzakagadzikana chaizvo. Asi pane zvakawanda zvatinofanira kuita kana tichizoramba tiine pfungwa dzakagadzikana.
Vanhu vakaita zvokushanduka-shanduka here?
Kuziva kuti Musiki ane hanya nesu kungaita kuti tive nepfungwa dzakagadzikana chaizvo
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Takabvepi?
w08 2/1 pp. 4-5